छारे रोग (Hysteria) र यसको उपचार Nepalpatra छारे रोग (Hysteria) र यसको उपचार
आजकल यो रोग वहुयात संख्यामा पुरूष महिलामा देखिन थालेको छ । यो रोग खासगरी मानसिक रोग अन्तर्गत राखिएको छ । यो रोगलाई मृगी रोगको नामले चिनिने गरेको छ । यो रोगलाई अंग्रेजीमा (Hysteria) भन्दछन् । यो रोग प्राय: कमजोर शरीर भएका महिला पुरुषमा बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
यो रोगको हमला कसलाई कुन समयमा हुन सक्छ भन्ने छैन । जुनसुकै समयमा यसको अटेक हुन सक्छ । गाउँघरमा यो रोग लागेका मान्छेलाई अटेक गरेको देखेर कतिपयले जुत्ता सुघाउदा या विवाह गरिदिदा निको हुन सक्छ भन्ने गरेको हामीले सुन्ने र देख्ने गरेका छौं ।
यो रोग नत यौनको कारण हुन्छ नत जुता सुघाउदैमा यो रोग निको हुनसक्छ । यो एक प्रकारको दिमागी रोग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आजको लेखमा मैले छारे रोग (Hysteria) को उपचार बारे प्रकाश पार्नेछु । आजको यो लेखमा तान्त्रीक र आयुर्वेदिक औषधिबाट उपचार गर्ने तरिकाबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गर्नेछु ।
यो रोगको उपचार टाउकोको अपरेशन हो भन्ने सुनिएको छ । यो अप्रेसन महंगो हुने हुनाले प्राय: यसको अपरेसन नगर्ने गरेको पाइन्छ । यो रोग लागेका मान्छेलाई लामो समयसम्म आयुर्वेदिक उपचार गराउदा निको हुने कुरा आयुर्वेद विज्ञानले सावित गरिसकेको छ ।
यो रोगको उपचार गर्नुपूर्व यसको कारणबारे जानकारी प्राप्त गर्न सके ठूलो साहेता हुने देखिन्छ । आजकाल सेक्स चाहनालाई दवाउने गर्दा पनि यो रोग लाग्न सक्ने भन्ने केहीको मत छ । यो रोग लागेका अधिकांश केश हामीले विवाह पस्चात पनि हुने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता रोग लागेका मान्छेलाई भिडभाड रातो रंगी चंगी देखिएमा पनि दौरा पर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता मान्छेको मुटु कमजोर हुने गरेको देखिएको छ । यस्ता रोग लागेको देखिएमा यस्ता रोगीलाई एक्लै हिड्नबाट बन्चित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्ता व्यक्ति चाँडो दुर्घटनामा पर्ने हुनाले होसियारी अपनाउन आवश्यक छ ।
छारे रोग (Hysteria) को उपचार गर्नेबारे प्रकाश पार्नु पूर्व एउटा जानकारी पस्कन मन लाग्यो त्यो हो बुटी बाँधेर उपचार गर्ने यो परम्परा चिकित्सामा आधारित उपचार हो । यसले मान्छेलाई कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सोयम मलाई पनि थाहा नभएको विषय हो । बुटि बाँधेर निको भएका थुप्रै केस हामीले पाएका छौं । सवैभन्दा ठूलो कुरा विश्वासलाई हामीले लिएका छौ ।
१. यन्त्र बनाउने तरिका सिधामा लेख्दा १५ र तल लेख्दा पनि १५ हुने गरी यन्त्र लेख्ने र त्यसमा हिंग राखेर आइतबार या मंगलबार गलामा बाध्नाले यो रोग निको हुन्छ ।
६ ८ १
२. अशोगन्धारिष्ट ३ चमच समभाग पानी मिलाएर दिनमा २ पटक खाने ।
३. ब्राह्मी बुटी १ गोली दिनमा २ पटक खाने ।
४. घोडताप्रेको पात टिपेर ल्याउने २ माना जति रसमा १ माना गाईको घीउ राखेर पकाउने र पाक्दा पाक्दा एक माना घीउ बाकी भएपछि उतारे र सिसामा भरेर राख्ने खाना खादा एक चमच औषधि दिनमा २ पटक खान दिने ।
५. गार्डिनल ६० मिग्रामको औषधि डाक्टरको परामर्शमा १ गोली दिनमा २ पटक ३ बर्ष सम्म दिनाले यो रोग निको बनाउदछ ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ बारे छलफल गर्न सीसीएमसीको बैठक
देशभर थप २७० जनामा कोरोना पुष्टि, ३०२ जना भए निको
भारतले नेपाललाई कोभ्याक्समार्फत ७ लाख २५ हजार खाेप दिने
देशभर थप ३०८ जनामा कोरोना पुष्टि, २९८ जना भए निको
देशभर थप ३३२ जनामा कोरोना पुष्टि, ४ जनाको मृत्यु